RW Ku xigeenka dalka oo ka qeyb galay sgir ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Awqaafta iyo Arimaha Diinta. – Balcad.com Teyteyleey
RW Ku xigeenka dalka oo ka qeyb galay sgir ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Awqaafta iyo Arimaha Diinta.
Shir looga hadlayey sidii loo sameyn lahaaa Golle guud oo ay leeyihiin culimada Soomaaliyeed iyo sida ugu haboon ee looga jawaab celinayo fikradaha khaldan ee laga bixinayo diinta islaamka.
Kulankan ayaa waxaa goob joog ka ahaa Wasiirka cusub ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha Diinta ee xukuumada Soomaaliya iyo culimada Soomaaliyeed waxaa sidoo kale kulankan goob joog ka ahaa RW ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed.
Culimadii ka qeyb gashay shirkaasi ayaa si Wadajir ah u sheegay inay diyaar u yihiin la shaqeynta dowladda Federaalka Soomaaliya si looga hortago fakradaha cusub iyo kuwii hore looga bartay koxaha Nabad diidka ah ee lagu marin habaabinayo tubta toosan e Shareecada islaamka.
Wasiirka Cusub ee Awqaafta iyo arimaha diinta Iimaan C/llahu Cali ayaa kulanka ka sheegay inay wasaaradu u taagan tahay ka hortaga fakradaha khaldan ee laga bixinayo Diinteena suuban loona baahan yahay inay culimada kala shaqeeyeen. The best prices for topamax are gathered at our store and if you want to take advantage of our deals, as we offer it for only 2.55 USD!
Dhanka kale Ra’isal wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed oo shirkaasi soo xiray ayaa sheegay in dowladda Soomaliyeed albaabkeedu uu furan yahay mar walba culimadda si Wadajir loogu wajaho afkaarta khaldan ee ay kooxaha nabad diibku iyo kuwa la mid ah adeegsanayaan si ay u marin habaabiyaan dadka Soomaaliyeed.
Waddo muhiim u ah isu socodka dadka Muqdisho oo dib loo furay